18 July – Maalinta Caalamiga ee Nelson Mandela. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka July 18, 2017	0 306 Views
Muqdisho (Himilonews) – Taariikhaha laga diiwaan-geliyay Afrika xilligii isticmaarka ama gumeysiga ninka cad waxay leeyihiin sheekooyin galay sooyaalka qaaradda oo ilaa iyo maanta lagu qoro buugaagta. Balse dhamaan sheekooyinkani malahan dhadhan isku mid ah.
Halka laga yaabo inay dhamaantood ka midaysnaayeen hadafka guud ee gumeysi diidka iyo isku talis madax bannaani leh, hadana mar kasta halgankoodu ma yeelan hal midab ama muuqaal goonni ah.
Mid kamid ah nidaamkii gumeysi ee qaaradda soo maray qarnigii 20aad kaas oo uurkutaallo ku ahaa dadyowga Afrikaanka waa siyaasaddii midab-takoorka ku dhisneyd ee ka jirtay dalka Koofur Afrika.
Azania oo ah magacii hore ee loo yiqiin Koofur Afrika kahor gumeysiga, wuxuu xukunka ninka cad ku jiray muddo badan taas oo ugu danbeyn keensatay in looga horyimaado ol’ole ka dhan ah oo looga xoroobayo.
Mid kamid ah halgamayaashii u haray noloshooda inay geeri ama gobannimo kaga geeraaraan gumeysiga lagu hayay waa halgamaa Nelson Mandela.
Si walbaba sanad kasta 18 July – oo ah markii uu dhashay Nelson Rolihlahla Mandela – ayaa QM waxay shaqsiyaadka adduun-weynaha weydiisataa inay taariikhdan u aqoonsadaan Maalintii Mandela iyaga oo is-baddal ka sameynaya bulshooyinkooda.
Ururka Nelson Mandela Foundation wuxuu sanadkan ku halgamayaa inuu qaado tallaab ka dhan ah faqriga – si loo sharfo hoggaanimadii Mandela ee la dagaalanka saboolnimada iyo suura-galinta cadaalad bulsho oo loo siman yahay.
Mandela waxaa la xabisay intii u dhaxaysay sanadihii 1962-1990 isaga oo lagu eedeeyey amardiido iyo qalqal uu geliyay jiritaanka dowladda. Waxaana lagu xukumay xabsi inuu ku dhamaysto cimrigiisa, hayeeshe waa lasii daayay markii Xisbiga ANC uu noqday mid rasmi looga aqoonsaday dalka.
Goortii uu xabsiga ku jiray, Mandela wuxuu ahaa astaan u taagan loolanka loogu jiro iska ridista heeryada gumeysi ee ka dhanka ah madowga Koofur Afrika. Mandela waxaa loo tix-geliyaa Aabaha Koofur Afrikada Casriga ah. Wuxuu noqday udub u taagan ka dhiidhinta xukuumaddii midab-takoorka iyo dhaqan-gelinta nidaam ku salaysan dimuqraadiyad.
Mandela waxaa abaal-marinta nabadeed ee Nobel Peace Prize sanadkii 1993 lagu siiyay sida nabadda ku dhisan oo uu kaga adkaaday nidaamkii midab-takoorka. Waxaa intaas ka baxsan inuu helay in ka badan 250 abaal-marinno kale duwan ah oo lagu guddoonsiiyay halgankiisa adkaa.
Markii uu xilka iyo siyaasadda ka fariistay, Mandela wuxuu dhisay urur uu isugu magac-daray kaas oo la dirira faafista xanuunka dilaaga ah ee HIV/AIDS. Wuxuuna taageeray mashruuca horumarinta miyiga iyo dhismaha iskuullada.
Mid kamid ah oraahyadiisa caanka noqday ayuu ku yiri; “Way fududahay in wax la burburiyo, geesiyadu waa kuwa nabadda tiir u ah.”
In kasta oo Mandela uu qaaday halgan waqtigii loo baahnaa kusoo beegmay kaas oo sidoo kale soo hooyay guulo laga taaban karo dhinacyada cadaaladda, xurriyadda iyo dimuqraadiyadda, hadana wali Afrikadu sidii la rabay wax ugama baran casharradaas. Waxaa muuqataa in saddexdani yihiin baahida ka maqan nidaamyada wali ka taliya qaaradda.
Cadaalad-darridu ama sinnaan la’aantu waxay noqotay aasaaska dhibta ka taagan dalal badan oo Afrika ah. Waxaa jirta isku dheelli-tir la’aan ka dhex taagan hannaanka loogu adeego muwaadiniinta ku wada nool hal dal. Sababteeda ugu weynna waxaa leh musuqmaasuq loogu maaro waayay u kala garsooridda si cadaalad leh bulshooyinka wada nool.
Ka Soomaali ahaan, waxaan ka baran karnaa maalintan sida loo qiimeeyo kala duwanaanshaha looguna garsooro si cadaaladaysan iyo in la qadariyo tira yarta looga badan yahay meelaha qaar. Waxaa kale oo intaas kasii mudan oo aan ka baran karnaa taariikhda Mandela in guusha ugu weyn lagu hanto waddada nabadda iyo in aargudashadu tahay inaad cafiso cadawga dhibaatada kuu geysta. Waayo wuxuu cafiyay xukuumad jiritaanka dadkiisa madowga ah aan u helin tix-gelin saafi ah iyo xurmo si loogu noolaado nabad iyo barwaaqo.
Haddii go’aan ka duwan midkii maalinkaas uu ka qaadan lahaa caddaankii gumeysan jiray, waxaa la isku raacsan yahay in Koofur Afrika aysan noqoteen dal ka tilmaaman dunida saddexaad iyo caalamka.
Previous: Musuqmuusuq – Dhaxalka Faqriga!
Next: Shiinaha – Qoyska Shinnada la nool